DOWNLOAD Soko က G-2 Galeb FS2004 - Rikoooo
downloads ရယူရန္7432
Author: လောနိတျမွို့ Midic, Goran Savic
Soko က G-2 Galeb တစ်ယူဂိုဆလပ်စစ်ရေးလေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ add-on တစ်ခုလုံးဝကို download လုပ်ပါရန်။ ထိန်းချုပ်ဖို့တစ်ဦးကအိပ်မက်, အသံကြီးမြတ်များမှာ!
ဒီလေယာဉ်ပျံအားလုံး position နဲ့ဆက်ဆံလက်ခံခဲ့သည်။ မေတ္တာရပ်ခံအရင်းအမြစ်များအပေါ် အခြေခံ. လေယာဉ်မှူး၏အသက်တော်ကိုနားထောင်: ဤခရီးစဉ်တန်ဖိုးရှိကြောင်းတစ်သက်ရောက်မှုပါပဲ။ အလွန်သာယာသောနှင့်ပျံသန်းဖို့လွယ်ကူသောအဖြေအိပ်မက်ယန္တရား။ 8 repaints နှင့်အတူရရှိနိုင်။ စိုးရိမ်ထိတ်လန်မနေပါနဲ့: ဤ add-on စတင်သောအခါ, အသင်တို့ကိုလေယာဉ်မှူးများ၏မျက်နှာဖုံးအတွက်လေထုစီးဆင်းခွင့်ရှိသည်။ ပိုပြီးင်အဘယျသို့, ဒီဟာမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်, သူတို့ရဲ့အလုပ်အတွက်စာရေးသူရန်သင့်အားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အဆိုပါ SOKO G-2 Galeb (အင်္ဂလိပ်: Seagull) ATI ကဒီဇိုင်းနှင့်ယူဂိုဆလားဗီးယား၏ SOKO ကထုတ်လုပ်ခဲ့ကွောငျးတစ်ခုတည်းအင်ဂျင်နှစ်ခုထိုင်ခုံနေရာအဆင့်မြင့်ဂျက်လေယာဉ်မှသင်တန်းဆရာနဲ့အလင်းမြေတိုက်ခိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ G-2 Galeb ယူဂိုဆလားဗီးယားနှင့်ဘော်လကန်ထုတ်လုပ်ပထမဦးဆုံးဂျက်လေယာဉ်လေယာဉ်တင်အမှတ်စဉ်ခဲ့သည်။
Atlas Cheetah E ကိုကြားဖြတ် FS2004